Imigangatho yokulinganisa kwimigangatho yemizi mveliso - China Imigangatho yokulinganisa esikalini abavelisi, abaxhasi
Isikali se Crane
Iphela kabini Beam Beam
Inzwa yesikali sezithuthi
Uxinzelelo kunye noxinzelelo
Inqaku elinye loMthwalo weSeli
Imilinganiselo yokulinganisa umgangatho kumzi mveliso
Inkonzo yasemva kokuthengisa kunye neMeko
Isikali seBhentshi engenamanzi
Isikali seTafile engenaManzi yeJJ
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPL
Inqaku elinye loMthwalo weSeli-SPH
Uhlobo lwekholamu-CTB / CTBY
Iphela kabini i-Shear Beam-DESB9
Iphela kabini i-Shear Beam-DESB8
Ubunzima beDigital Floor Scales Industrial Low Profile yePallet Scale Carbon Steel Q235B
Isikali somgangatho we-PFA221 sisisombululo esipheleleyo esidibanisa iqonga lesikali esisiseko kunye nesiphelo. Ilungele ukulayishwa kwamazibuko kunye nezixhobo zokuvelisa ngokubanzi, iqonga lesikali le-PFA221 libonisa indawo engafakwanga yipleyiti yedayimani enika iinyawo ezikhuselekileyo. Isiphelo sedijithali sisingatha imisebenzi eyahlukeneyo yokulinganisa, kubandakanya ubunzima obulula, ukubala kunye nokuqokelela. Le phakheji ilungelelaniswe ngokupheleleyo ibonelela ngokuchanekileyo, ukuthembeka okunobunzima ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo zeempawu ezingafunekiyo kusetyenziso olusisiseko lobunzima.
Isilinganisi se-5 seDigital Platform yoMgangatho ngeRamp / uMgangatho oPhathekayo woMgangatho woShishino
Isikali somgangatho weSmartweigh sidibanisa ukuchaneka okungathethekiyo kunye nokuqina kokumelana neemeko ezinzima zeshishini. Ezi zikali zomsebenzi onzima zakhiwe ngentsimbi engenacici okanye ipeyintiweyo yentsimbi yekhabhoni kwaye ziyilelwe ukuhlangabezana neemfuno ezahlukeneyo zesisindo zeshishini, kubandakanya ukubethelwa, ukugcwaliswa, ukulinganiswa, kunye nokubalwa. Iimveliso ezisemgangathweni zipeyintwe ngentsimbi epholileyo okanye ngentsimbi engenasici kwi-0.9 × 0.9M ukuya kwi-2.0 × 2.0M ubukhulu kunye ne-500Kg ukuya kwi-10,000-Kg. Uyilo lweerock-pin luqinisekisa ukuphindeka.
3 Ton Umgangatho Industrial Ukulinganisa Imilinganiselo, Warehouse Umgangatho Scale 65mm Platform Ukuphakama
Isikali somgangatho se-PFA227 sidibanisa ulwakhiwo olomeleleyo, indawo ekulula ukuyicoca. Kuyomelela ngokwaneleyo ukubonelela ngokuchanekileyo, ukuthembeka okunobunzima ngelixa umile ukuze usetyenziswe rhoqo kwiindawo ezimanzi nezonakalisayo. Yenziwe ngentsimbi engenasici, ilungele ukusetyenziswa kwezempilo ezifuna ukuhlanjwa rhoqo. Khetha kwiintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa ezikuthintela ukukrwela kwaye kulula kakhulu ukuzicoca. Ngokunciphisa ixesha kunye nomzamo ofunekayo ekucoceni, isikali somgangatho se-PFA227 sikunceda wandise imveliso.
Incwadana Yethu Yeeveki
Kuyinyani ekudala isaziwa ukuba umgcini-mkhosi uya kulungelwa ngu
enokufundwa kwephepha xa ujonga
Idilesi:Isitalato i-1 jinhua, isithili se-zhifu
UkuLungiswa koBunzima beSeti, Ubunzima obuqinisekisiweyo, UkuLungiswa kweMisa, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital, Ishedi ye-Shear Bead Cell, Isikali sokulinganisa sokulinganisa,